Waxgaradka Gobolka Gedo Oo cambaareeyay Dilka 5 qof oo lagu dilay Faxfaxdhuun – SBC
Waxgaradka Gobolka Gedo Oo cambaareeyay Dilka 5 qof oo lagu dilay Faxfaxdhuun
Odayaasha iyo Waxgaradka gobolka Gedo ayaa Cambaareyn dusha uga tuuray fal ay ciidamada Dowlada Kenya ay ugu dileen ku dhowaad 5 qof deegaan lagu magacaabo Fax fax dhuun oo ka tirsan gobolka Gedo.
Waxgaradkan oo kulan ku yeeshay Magaalada Baardheere ee gobolkaasi ayaa soo saaray cambaareyn ay ku cambaareynayaan falkani iyagoona sheegay in ay tahay arintaasi mid xadgudub ku ah gobolka islamarkaana aan loo baahneyn in ciidamada ay ku dhaqaaqaan.
Falka Dilka 5tan qof ayaa yimid ka dib markii ciidamada Kenya ee Halkaasi ku sugan gaadiid ay wateen lala helay Miino dhulka lagu aasay taas oo ay ku soo bexeen dadkan oo u badan dad xoolo dhaqato ah islamarkaana ay ciidanku hubiyeen rasaas.
Xaaji Daahir macalin Axmed oo ka mid ah Masuuliyiinta Deegaanka Fax faxdhuun Ayaa isagu saxaafada u sheegay in arintani ay timid ka dib howlgal markii uu dhacay Qaraxa ciidamada Kenyana ay qabqabasho iyo dil u geysteen dadkaasi.
Dhinaca kale Masuul ka tirsan Ciidamada DKMG ah Soomaaliya ee halkaasi ku sugan ayaa sheegay in dadka la dilay ay miino dhigayeen inkastoo tasi ay beeniyeen dadka deegaanka iyagoona sheegay in dadkaasi ay ahaayeen dad xoolo dhaqato ah oo deegaanka ku sugnaa.
Sikastaba ha ahaatee Ma ahan markii ugu horeysay oo ay ciidamada Dowlada Kenya ka geystaan deegaanada Gobolka Gedo oo ay mudooyinki ugu dambeeyay ku soo qul qulayeen, waxayna aheyd dhowr jeer oo hore markii duqeymo ay geysteen ciidamada Kenya ay ku nafwaayeen dad aan waxba galabsan.